Enwere m ike undelete Echefuola Photos si iPhoto Library on Mac?
A oge gara aga, mgbe m na-edezi foto na iPhoto Ọbá akwụkwọ, m MacBook mberede mechie. Mgbe ahụ, m restarted ya, m ghọtara na foto niile m iPhoto n'ọbá akwụkwọ e okụrede. M na-amaghị ihe mere, ma m mkpa n'ezie foto m azụ. Nwere ike o na-agwa m otú naghachi iPhoto n'ọbá akwụkwọ photos? Ezi echiche.
Hoo haa-ekwu okwu, iPhoto n'ọbá akwụkwọ photos nwere ike furu efu ruru mberede nhichapụ, iPhoto n'ọbá akwụkwọ nrụrụ aka, unknowing formatting nke Mac nkebi / olu, usoro njehie, bupụrụ iPhoto ahịhịa na ụfọdụ ndị ọzọ ihe. Ọ bụrụ na ị nwere ọzọ iPhoto n'ọbá akwụkwọ ndabere na gị Mac, ị nwere ike weghachite furu efu foto site na ya. Ma, i mkpa iji nweta ihe iPhoto mgbake ịba uru inyere gị aka. Ebe a ga-amasị m ka nwere ike ikwu atọ ụzọ-enyere gị aka naghachi foto site na iPhoto n'ọbá akwụkwọ.
Usoro 1: Naghachi furu efu iPhoto photos na iPhoto mgbake software
Method 2. Naghachi iPhoto n'ọbá akwụkwọ si ahịhịa
Method 3. wughachi iPhoto n'ọbá akwụkwọ
Naghachi foto site na iPhoto Ọbá akwụkwọ, ga-amasị m ka nwere ike ikwu Wondershare Data Recovery for Mac, a ruru eru iPhoto mgbake omume na-ike-naghachi iPhoto n'ọbá akwụkwọ nakwa dị ka ịrụ iPhoto ahịhịa mgbake. N'agbanyeghị otú photos furu efu gị iPhoto Ọbá akwụkwọ, i nwere ike inwe ha azụ ole na ole clicks na ngwá ọrụ a. Download nzọ version si n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Họrọ a mgbake mode iji weghachi iPhoto
Mgbe wụnye na launching Wondershare Data Recovery for Mac, ị ga-ahụ a bụ isi window na ọtụtụ mgbake nhọrọ. Ị nwere ike gụọ ntụziaka ọma n'ụzọ zuru ezu ịghọta otú ndị a nhọrọ arụ ọrụ.
Ebe a, na-agbake ehichapụ foto site na iPhoto, biko họrọ "Echefuola File Iweghachite" mbụ.
Cheta na: Ọ na-ukwuu aro iji wụnye ihe omume na ọzọ nkebi nke gị Mac iji zere ime ka data overwriting.
Nzọụkwụ 2. Iṅomi na ọnọdụ nke iPhoto ọbá akwụkwọ furu efu photos
Ugbu a, ị dị nnọọ mkpa ka họrọ nkebi na ị ịtọ gị iPhoto ọbá akwụkwọ na pịa "iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu furu efu photos.
Cheta na: Ọ bụrụ na ọ bụ nkebi formatting-akpata nke, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3. Naghachi iPhoto n'ọbá akwụkwọ furu efu photos
The hụrụ faịlụ niile ga na-egosipụta na-ekpe nke window, na ị ga-enwe ike ihuchalu hụrụ photos. Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka họrọ gị furu efu photos na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha azụ gị Mac.
Cheta na: Biko adịghị na-natara photos azụ mbụ nkebi.
Video nkuzi nke iPhoto mgbake
Ọ bụrụ na gị photos e mmadụ na mberede dọkpụụrụ ka iPhoto ahịhịa na ị na-apụghị ịdọrọ ha azụ Mac desktọọpụ, ị nwere ike na-aga gị iPhoto ahịhịa, wee họrọ ndị ehichapụ foto na nri pịa iji họrọ "Weghachi ka iPhoto Library". Ị iPhoto ahịhịa photos ga-Ewepụtara mfe. Ọ bụrụ na usoro a na-adịghị aka, Wondershare Data Recovery for Mac ga-enyere gị mgbe ahụ.
Mbụ, ịkwụsị iPhoto na re-imeghe ya. Pịa ma jide Wụk na Option igodo mgbe ị pịa na iPhoto akara ngosi. Mgbe ahụ a dialog ga-apụta na wughachi nhọrọ. Họrọ otu nhọrọ ị ga-achọ iji wughachi iPhoto n'ọbá akwụkwọ.
Olee otú Naghachi Digital Igwefoto Photo on Mac
> Resource> Naghachi> iPhoto Recovery: Olee naghachi ehichapụ Photos si iPhoto Library